Samsung Galaxy S9 - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းသုံးခု | Androidsis
Samsung Galaxy S9: စိတ်ဝင်စားစရာသတင်း ၃ ချက်
Samsung Galaxy S9 ကို ၂၀၁၈ နွေ ဦး ရာသီတွင်သာပြသမည်ဖြစ်သည်သို့သော်ထိုအချိန်အထိကောလဟလအများစုကဖော်ပြသည်မှာ၎င်းသည်ရှုထောင့်သုံးဘက်မှကြည့်လျှင်အလွန်အရေးကြီးသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Galaxy S9 သည် iPhone X တွင်သိသာထင်ရှားသည့်သုံးစွဲသူအခြေပြုသည့်အချိန်ရောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စတင်ရောင်းချချိန် မှစ၍ တစ်နှစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်။ က galaxy S8.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည် မော်ဒယ်နှစ်ခု, ယခုအထိ, နှင့်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များတို့တွင် Galaxy Note 8 တွင်ရှိပြီးသား features တွေအများအပြားတွေ့လိမ့်မည်။
1 Galaxy S9 ကိုဖေဖော်ဝါရီလသို့မဟုတ်မတ်လ ၂၀၁၈ တွင်ရောင်းချမည်
2 Sunflower နည်းပညာဖြင့် S-AMOLED မျက်နှာပြင်
3 18CA အထောက်အပံ့ဖြင့် Cat6LTE modem
Galaxy S9 ကိုဖေဖော်ဝါရီလသို့မဟုတ်မတ်လ ၂၀၁၈ တွင်ရောင်းချမည်
ဆမ်ဆောင်းသည် Mobile World Congress နည်းပညာပွဲစဉ်တွင်၎င်း၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုပုံမှန်ကြေငြာခဲ့သဖြင့် S9 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီလသို့မဟုတ်မတ်လ 2018 ၏လ.
ထိုအချိန်အထိ Samsung Galaxy S9 တွင်၎င်းချစ်ပ်ကိုထည့်သွင်းမည်ဟုယုံကြည်ကြသည် Qualcomm Snapdragon 845တောင်ကိုရီးယားရှိလာမည့်နှစ်၏အကောင်းဆုံးပရိုဆက်ဆာဖြစ်သည် ယာယီသီးသန့်.
ထိုနည်းတူစွာပင်၎င်းသည်ပျောက်ဆုံးမည်မဟုတ်ပါ Exynos ပရိုဆက်ဆာပါသည့် Galaxy S9 မော်ဒယ်လ်။ မျက်နှာပြင်ကတော့ Galaxy S9 ရဲ့အသေးငယ်ဆုံးပုံစံရှိလိမ့်မယ် 5.8 လက်မစဉ် S9 Plus သည် ၆.၂ လက်မအရွယ်အစားရှိသည်။ တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းလက်ရှိမျိုးဆက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤနေရာတွင်အသစ်အဆန်းမရှိပါ။
Sunflower နည်းပညာဖြင့် S-AMOLED မျက်နှာပြင်
သို့သော် Samsung Galaxy S9 နှင့်အတူလာနိုင်သည် "Sunflower" ဟုခေါ်သောသင်၏ S-AMOLED ဖန်သားပြင်တွင်နည်းပညာအသစ်တစ်ခု။ ၎င်းသည် terminal ၏ပထမဆုံးအသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ Samsung Galaxy range ရှိဖုန်းများသည်အလင်းထွက်နှုန်းနှင့်အသေးစိတ်အဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်များရှိသည်။
သို့သော်ယခု iPhone X တွင် Samsung ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသော AMOLED မျက်နှာပြင်ပါလာသည်နှင့်အမျှတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အဓိကပြိုင်ဘက်များနှင့်ဝေးကွာသွားစေရန်ပိုမိုကြိုးပမ်းနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လည်းမျက်နှာပြင်နှင့်ပတ်သက်။ ၌, Galaxy S9 သည်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆင်တူသည် iPhone အတွက် X ကို။ la မှောင်မိုက်အစင်း iPhone X ရဲ့ထိပ်ဘက်မှာတော့နောင်လာမယ့် Samsung flagship မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
Selfies အတွက်ကင်မရာ၊ အလင်းအာရုံခံ၊ Iris စကင်နာနှင့်အနီးကပ်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအချက်အလက်သည်တောင်ကိုရီးယား၏အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုစီမံခန့်ခွဲသောအဖွဲ့အစည်းမှအတည်ပြုပြီးသောမူပိုင်ခွင့်ဖြင့်ထောက်ခံသည်။
18CA အထောက်အပံ့ဖြင့် Cat6LTE modem
Samsung Galaxy S9 ၏ဒုတိယအရေးကြီးသောအသစ်အဆန်းမှာ၎င်းင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည် 18CA အထောက်အပံ့ဖြင့် Cat6LTE modem။ ဒီ modem ကိုနောက်နှစ်အစောပိုင်းမှာထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးထိတွေ့နိုင်ပါတယ် အထိ 1.2 Gbps အမြန်နှုန်း။ ၎င်းသည်လက်ရှိ Galaxy S20 modem ထက်စွမ်းဆောင်ရည် ၂၀% တိုးတက်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော်ထိုအမြန်နှုန်းများကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်ကွန်ယက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
နောက်ထပ်ကောလဟလတစ်ခုက Samsung Galaxy S9 သည် Apple ၏ A11 Bionic chip နှင့် the Neur processor ကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Huawei Kirin 970။ ဒီပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် အတုထောက်လှမ်းရေး algorithms နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သော applications များ.
ထို့အပြင်ဤပရိုဆက်ဆာသည် Cloud တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်မလိုဘဲဒေသအလိုက်ဒေတာအမြောက်အမြားကိုလုပ်ဆောင်ရန်လည်းဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ ဒီလိုမျိုး, Samsung တွင် Bixby digital assistant ရှိပြီးဖြစ်သည် အရာများအတွက်သူတို့အများအပြား applications များဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်။
ဖြစ်ခြင်းအချိန်ကိုများအတွက် Samsung ကနောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးနဲ့ Galaxy S9 ကိုစတင်ရောင်းချမလားဆိုတာတော့မသေချာပါဘူး, ထဲမှာတကဲ့သို့ 8 မှတ်ချက်သို့သော်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုရှိသည် - မိုဘိုင်းကိုမှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း megapixels နှင့်အခြားပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း Note 8 ရှိတူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများပါသည့်နောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်မျိုးဖြင့်ဖြစ်စေလွှတ်တင်နိုင်သည်။
ဒီကောလဟာလတွေအားလုံးထွက်ပေါ်မလာဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရ ဦး မှာပါ။ ဒါပေမယ့်လတွေကြာလာတာနဲ့အမျှ Galaxy S9 ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့သေချာပါတယ်။
အရင်းအမြစ်: အဆိုပါ Inquirer
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung Galaxy S9: စိတ်ဝင်စားစရာသတင်း ၃ ချက်
androidsis မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ Maze Alpha ဆုကိုရယူပြီးပြီလား။ ငါရှာ။ မတွေ့ပါ။
Cele Perka ဟုသူကပြောသည်
Samsung Galaxy S9 ကအာရုံကြောပရိုဆက်ဆာကိုယူလာစေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ယခု A11 Bionic chip နှင့် Kirin 970 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် exynos နှင့် Qualcom သည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည်။
Cele Perka သို့ပြန်သွားပါ
David de Garcia က ဟုသူကပြောသည်
David Deif Garcia သို့ပြန်သွားပါ
Nokia 2,7နှင့်9ကို ၂၀၁၈ အစောပိုင်းတွင်မိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်